“Dadku Inay Diinta Ku Kalsoonaadaan, Waa Sababaha Lagu Helo Gargaarka Alle” Sh. Dirir
Hargeysa (Dhamays) – Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir ayaa shaaca ka qaaday Dadku inay diinta Ilaahay ku kalsoonaadaan, oo aanay ka leexin duufaanada iyo dareenada Shaydaanka, Maalka, Awlaada, waa sababaha lagu helo gargaarka Alle.
Khudbadii Jimcaha Maanta oo Sheekh Dirir kaha hadlayey asbaabaha lagu helo gargaarka Alle ayuu ku bilaabay:- “Aduunyadu waa meel dadku way ku imtixaaman yihiin, dhibkaasina waxuu u badan yahay dadka Muslimka, dhibkaasi mid dabiici ah oo Ilaahay ku ridday wuu noqdaa, mid iyagu (muslimiintu) sabab u yihiin iyo mid cadowgoodu sabab u yahay, intaba, waxaynu uga baahan nahay Ilaahay inaan gargaar ka helo, si uu inooga saaro.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gargaarka Ilaahay een u baahan nahay waxuu leeyahay sababo lagu helo, waxaanu yidhi, “Shareecada Ilaahay oo la hirgeliyo. Ilaahay markuu ummada abuuray kitaab ayuu soo raaciyey ay ku dhaqmaan, si dhibaatada uga baxaan. Kolay dadku shuruuc kale ayey adeegsadaan kala-haga, markaa inay sharciga Ilaahay qaataan oo ku dhaqmaan.”
Diinta Ilaahay oo loo hiiliyo ayuu sheegay Sheekh Maxamed inay ka mid tahay sababaha lagu helo gargaarka Alle, waxaanu yidhi, “Ilaahay waxuu quraanka ku sheegay, “Hadaad u hiilisaan Ilaahay, wuu idiin hiilinayaa” u hiilinta Ilaahayna waa in hadyada weyn ee xagiisa ka timi Kitaabkiisa lagu dhaqmo.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in ku sugnaanshaha diinta Islaamka ka mid tahay sababaha nasriga Alle lagu helo, waxaanu yidhi, “Dadku inay diinta Ilaahay ku kalsoonaadaan, oo aanay ka leexin duufaanada iyo dareenada Shaydaanka, Maalka, Awlaada, waa sababaha lagu helo gargaarka Alle. Dadku inta ay aduunyada joogaan imtixaan ayaa la marinaya, inta imtixaanka gudubta ayaa amaantiisa iyo abaalmarintiisa helaya.
“Ilaahay waxuu leeyahay ha moodina in Jannadu iska dhowdahay oo gedaanka laga qaadanayo, ila aaad martaan dhib adag sidii ummadahii hore u mareen, ilaa ay cawdeen oo calaancaleen Rasuulka iyo intii la socotay, oo yidhaaheen Ilaahay Gargaarkiisii Mee? Ilaahayna waxuu yidhi “Nasrigaygu wuu idiin dhow yahay hadii aad sababtiisa la timaadaan. Wakhtiga adag iyo xilliyada fitnada waxaynu kaga bixi karnaa, inaan dadku Diinta saluugin, balse ay xejistaan.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in sababaha lagu helo ggargaarka Alle ka mid tahay in dadku sharaf iyo cisiga ka raadiyaan diintooda, waxaanu yidhi, “Cisiga iyo sharafta ummada islaamku waxay ku heshay diintooda, waxa muhiim ah inay halkaa ka raadiyaan. Nabigu NNKH isagoo qofka muslimka ah la talinaya waxuu yidhi, “Ogow sharafta qofka muslimka inay ku jirto cibaadada habeenkii, cisigiisuna waxuu ku jiraa inuu dadka ka maarmo.” Hadii ummada islaamku dad shisheeye ah ku tiirsan yihiin cisi ma haystaan, ayuu inoo sheegaya Nebigu NNKH.
“Cumar Binu Khadaab oo kormeeraya dhulkii muslimiintu xoraysay ee Shaam oo saxaabiga Abii Cubayda madax ka ahaa ayuu soo maray iliilad biyo socdaan, markaa ayuu intuu kabahii sudhay ushiisa oo degta saartay, hashiina hogaanka qabsaday cago-cadaan kaga talaabay, saxaabigii Abi Cubayda ayaa yidhi, ‘Sidaa si ka fiican ayaan jeclaa inaad samaysid, adigoo Madaxweynahii Muslimiinta ah oo dhexmaraya dhulkii Gaalada aynu ka xoreynay ay ku arkaan, ilayn dad gaalo ah iyo kuwo Islaam ah way joogane! Cumar RC aad ayuu uga xumaady hadalkii saxaabiga, waxuu yidhi ‘Ahay-aah, muu ahayn ninkii odhan lahaa hadlaka adiga, Abi Cubaydow ereygaaa? Markaa Cumar Binu Khadaab hadalkiisii dhaxalgalka noqday ayuu yidhi, “Waxaynu ahayn qoom dadka ugu dulisan, Ilaahay waxuu innagu ciseeyey diinta Islaamka, Mar kastoo cisiga aynu ka raadino meel aan islaamka ahayna, Ilaahay wuu inna dulaynayaa! Cisiga dhar la gashado, borotokoolaad iyo isgiijin laguma helo, ee diinta oo lagu dhaqmo ayaa lagu helaa.
La soco qeybta labaad insha alaah.
Previous: TALYANLE Oo Aas Qaran Loogu Sameeyay Hargeysa
Next: “Ma Maanta Ayay Taagan Tahay In Odayaasheenii Qabriyadooda La Iibiyo….” Sheekh Aadan-Siiro